:: My Little World ::: September 2011
Changes Summary ကိုကြည့်၊ ရှိနေတဲ့ Documentation တွေကိုဖတ်၊ System ကို မြင်အောင်ခံစား၊ Existing code တွေကိုလေ့လာ..
ပြောင်းလဲမှု့ တွေအတွက် လိုအပ်မယ်ထင်တာတွေကို ၃-၄ ရက်ကြာ အချိန်ယူ... စိတ်ကူနဲ့ တွေး၊ ရေးထည့်ပြီး...
Compilation Error မရှိ၊ ကိုယ်ပြင်ထားသမျှ ပို့ ဖို့ပြင်ဆင်နေတုန်း သကာလမှာ...
ကိုယ်လိုလူတချို့ ရဲ့ Gtalk status တချို့ ကို တွေ့ လိုက်ရတဲ့အခါ မှတ်ထားချင်စိတ်ပေါ်သွားတယ်..
Posted by Nay Nay Naing at 9/29/2011 03:03:00 PM0comments
Posted by Nay Nay Naing at 9/27/2011 09:13:00 AM4comments
ဒီနေ့သောကြာနေ့နေ့ လည်စာ အနေနဲ့ထမင်းကြော်စားဖြစ်တယ်။
ဒီတစ်ခုထဲနဲ့ တော့ ကျန်နေသေးတဲ့ သောကြာနေ့ တစ်ဝက်မှာ အလုပ်ဆက်လုပ်ဖို့အတွက် လုံလောက်တဲ့ အင်အားကို ဘယ်လိုမှ မရနိုင်ဘူး။ ဒီတော့ ဟင်းရံအနေနဲ့တချို ဟင်းတွေ ထပ်မှာ စားကြပါတယ်။
ပဲပြားနဲ့မှို
ကုန်လားဆို တစ်ယောက်တည်းတော့ အဲလောက်ကြီး ဘယ်ကုန်နိုင်မလဲ။ သောကြာနေဆိုတော့ ထုံးစံအတိုင်း အဖွဲ့ လိုက်နေ့ လည်စာသွားစား ကြရတာ။ အပေါ်မှာပါတဲ့ ပဲပြားမှို၊ ကြက်တောင်ပံကြော် နဲ့ကန်စွန်းရွက် တစ်မျိုးကို ၃ ပွဲစီမှာပြီး လူ ၁၂ ယောက်မျှစားကြပါတယ်။ အပေါ်က တစ်ဆက်က လူ ၄ယောက်စာ အရံဟင်းတွေပေါ့။
မစားလို့ မဖြစ်ဘူး။ အစာများများ စားပေးရတယ်၊ စားမှ အားရှိမယ်၊ အားအင်အပြည့်ရှိမှ အလုပ်လုပ်နိုင်ကြမယ်။
Posted by Nay Nay Naing at 9/23/2011 04:36:00 PM 1 comments
ပြီးခဲ့တဲ့ ရက်တွေကစပြီ အလုပ်မှာ အရေးတကြီး Project တစ်ခုကို ကူကြရမယ်ဆိုတဲ့ အတွက် အလုပ်တွေ ပိုများလာတယ်။
မူရင်း ကိုယ်လုပ်နေကြ အလုပ်ကို လုံးဝရပ်ပြီး ကူရမယ့်အလုပ်ကိုသာ ၁၀၀% လုပ်ကြပါတဲ့ ညွှန်ကြားချက်တွေလာပေမယ့်.. တကယ်တကယ် လက်တွေမှာ ကိုယ်တာဝန်ယူထားဆဲ အရာတွေကို လုံးဝ ၀င်မပါပဲ နေဖို့ ဆိုတာ မဖြစ်နိုင်တဲ့အတွက် လုပ်နေကျအလုပ်တွေကို ၅၀-၆၀% နှုန်းလောက် အထိ လျှော့ချဖို့ ကြိုးစားရင်း ကူညီရမယ့် Project မှလည်း လိုအပ်ချက်အတိုင်း ၁၀၀% ဆိုတဲ့ ပါဝင်မှု့ မျိုး ရနိုင်ဖို့ကြိုးစားနေရပါတယ်။
ဘာပဲဖြစ်ဖြစ် အဆင်ပြေအောင် လုပ်နိုင်မယ် ထင်ပါတယ်။ မလုပ်နိုင်ဘူးဆိုတမျိုး လုပ်လို့ လည်း မရနိုင်ဘူး။
စဉ်းစားရတာတွေ၊ ချက်ချင်းပြောင်းလဲ တွေးရတာတွေ သိပ်များတယ်။ ခုလိုပဲ အာရုံတစ်ခုကို ခဏလွှဲယူရတယ်။
Posted by Nay Nay Naing at 9/22/2011 02:50:00 PM0comments
ဘာရယ်မဟုတ်ပါဘူး.. မနေ့ က Update လုပ်လိုက်တဲ့ အသစ် (Version 1.1.3) မှာ.. နေ့ နဲ့ည (Day and Night mood) ပါလာပြီ.. ညဘက်ရောက်တဲ့အခါ Smurfs တို့ ရွာအိမ်လေးတွေ မီးထွန်းထားတာ သဘောကျလို့ ...
အပြင်က အချိန်နဲ့ မတူဘူး။ အခု ဒီမှာ နေ့ လည် ၁၁ ကျော်မှာ Smurfs ရွာလေးမှာ ညဆိုပြီးပြနေတယ်.. မနက် ၈ နာရီလောက် ကြည့်တုန်းက နေ့ ခင်း အလင်းရောင်နဲ့အိမ်တွေမြင်ရတုန်းပဲ.. ကြည့်ရတာ အဲဒီထဲက အချိန်က ယူအက်စ်ကအချိန် တစ်ခုခုကို ယူထားတယ် ထင်တယ်.
Game: iTune Store - Smurfs' Village
သူငယ်ချင်းတွေရဲ့ ရွာလေးတွေလည်း မှောင်နေတယ်။
ပိုင်ရှင်တွေလိုပဲ ရွာသူရွာသားတွေက သိပ်ကြိုးစားကြတယ်၊ မှောင်ကြီးမည်းကြီးထဲမှာ အလုပ်လုပ်နေကြတာ တွေ့ ရပါတယ်။
ပုံတွေက ညပိုင်းဆိုတော့ မှောင်နေလို့သေချာမမြင်ရဘူး။ တကယ်ဆို သူတို့ ရွာလေးတွေမှာ ပြင်ထားတာ လှတယ်။ အားကျပြီး ကိုယ်လည်း ပြင်ကြည်ဖို့ စိတ်ကူးမိပေမယ့် မပြင်တတ်တာရယ်၊ စိတ်မရှည်တာနဲ့ဒီတိုင်းထားပဲ လိုက်တော့တယ်။
အဲ့ဒီလို အချိန်အရပြောင်းပြီး ပေါ်တာမျိုး မကြိုက်ဘူးဆိုရင် Option မှာ Off လုပ်ထားလို့ ရတယ်။ စိတ်ကူးမိတယ်။ အပြင်ဘ၀တွေမှာလည်း ဂိမ်တွေထဲကလို ကိုယ်မကြိုက်တဲ့ အချိန်တွေကို Off လုပ်ထားလို့ ရရင် သိပ်ကောင်းမယ်။
ဘယ်အချိန်တွေကို လုပ်ထားချင်လည်း ဆိုရင်
နေ့ ရက် - တနင်္လာ မှ သောကြာ အထိ ငါးရက်
အချိန်က - မနက် ၉ နာရီမှ ညနေ ၆ နာရီ အထိ
Posted by Nay Nay Naing at 9/20/2011 11:18:00 AM5comments
Posted by Nay Nay Naing at 9/18/2011 01:25:00 PM2comments
Advanced Grammer in Use Activities - $9.99
English Grammer in Use Activities - $9.99
Essential Grammer in Use Activities - $9.99
Advanced Grammer in Use Tests - $4.99
English Grammer in Use Test - $4.99
Essential Grammer in Use Tests - $4.99
IELTS6Trainer - $9.99
IELTS7Trainer - $9.99
FCE Trainer - $9.99
CAE Trainer - $9.99
PET Trainer - $9.99
အားလုံးပေါင်းလိုက်တော့ US$94.89 တန်ဖိုးရှိတယ်။ ဖုန်းကို jailbreak လုပ်မထားဘူး။ ဒီတော့ အဲဒီ Applications တွေက iTune Store ကဈေးအတိုင်း တန်းဖိုးရှိတယ် ပြောလို့ ရနိုင်မယ်။
ဒါတွေ ထည့်ထားပြီး ဖတ်နေတယ်ပေါ့ဆို..
ဘယ်ကဟုတ်ရမှာလဲ.. အလကားရတယ် ဆိုတုန်းက ယူထားလိုက်တာ။
ကြာပါပြီ။ တရေးနိုးသော်အကြံပေါ်ဆိုသလို မနက် ၂ နာရီလောက် တရေးနိုး ပြန်အိပ်မရတာနဲ့ဖုန်းနဲ့ ဖေ့ဘုတ်ဝင်ကြည့်တဲ့အချိန် တိုက်တိုက်ဆိုင်ဆိုင်ဆိုသလို သူငယ်ချင်းတစ်ယောက်က ဒါတွေ Free ဖြစ်နေတယ်ဆို တင်ထားတာတွေ့ တုန်းက ဒေါင်းလုတ်လုပ် ယူထားလိုက်တာ။
မှတ်ချက်။ ။ အလုပ်လုပ်ရတာ စိတ်မပါ၊ အတော်ကြီးကို အာရုံမရဖြစ်နေတယ်။
Thanks Ko Ye (YWN) for sharing this info with us in fb.
Posted by Nay Nay Naing at 9/15/2011 10:49:00 AM7comments
စက်တင်ဘာ ၄ နေ့ညနေပိုင်းမှာ ကျွန်မ အဖိုးဆုံးတယ်ကြားတယ်ဆိုပြီး အမျိုးတစ်ယောက်က ဖုန်းကို sms ပို့ လာတယ်။ အံ့သြသွားတယ်။ မဖြစ်နိုင်ပါဘူးဆို မယုံချင်ဘူး။ သောကြာနေ့ ကတင် အိမ်နဲ့ ဖုန်းပြောတာ၊ အဖိုး နေမကောင်းဘူးလည်း မပြော၊ ဘာမှ ထူးထူးခြားခြားပြောတာ မျိုးမကြားခဲရဘူး။ ဒါနဲ့ အိမ်ကို ဖုန်းခေါ်တယ် မရဘူး။ ဟန်းဖုန်းတစ်လုံးကိုက ဖုန်းဝင်သွားတယ်။ ညီမလေး ထူးသံပဲကြားရပြီး ဖုန်းပြန်ပျက်သွားတယ်။ ထပ်ခေါ်တာ ဘယ်လိုမှ မရတော့ဘူး။ မဟုတ်ပါစေနဲ့ လို စိတ်ထဲမှာ တွေးနေမိတယ်။ အဖိုးက အသက်သာကြီးတာ နေမကောင်းဖြစ်တယ် ဘာညာ ထူးထူးခြားခြား မကြားမိခဲ့ဘူးလေ။ နောက်နေ့ မနက် အိမ်ကို ဖုန်းဆက်တယ်။ အဖေနဲ့ စကားပြောတော့ ဟုတ်တယ်တဲ့။ တနင်္ဂနွေနေ့မနက် ၂း၄၀ မှာ အဖိုးဆုံးတယ်ပြောတယ်။ ပြီးခဲ့တဲ့ နှစ် မြန်မာပြည်ပြန်ချိန်က အဖိုးရှိရာကို သွားပြီး ကန့် တော့ဖြစ်တယ်။ ဒီတစ်ခေါက်ပြန်ရင် အဖိုးမရှိတော့ဘူး။
ကျွန်မရဲ့ မိဘတွေတောင်မှ စနေနေ့ မှာ ဘကြီးတို့ဖုန်းဆက်လာလို့အဖိုးဖျားနေတယ် သိခဲ့ရတာ၊ အဖျားသွေးနည်းနည်း လောက်ပဲရှိပါတယ်။ ညနေပိုင်းတော့ ချောင်းနည်းနည်းဆိုတယ် သိခဲ့ရတယ်။ ဒါပေမယ့် အသက်ကြီးတဲ့ လူကြီးပိုင်းဆို ဘာပဲဖြစ်ဖြစ် အမေနဲ့ အဖေ သွားလိုက်မယ် တိုင်ပင်စီစဉ်နေတုန်း၊ နောက်နေ့မနက်စောစောမှာ ဆုံးသွားပြီဆို သိလိုက်ရတာလို့ ပြောပြတယ်။ အဖိုးဟာ ငြိမ်းငြိမ်းချမ်းချမ်းပဲ ဘ၀တစ်ပါး ကူးပြောင်းသွားတယ်လို့ပြောပြတယ်။ အဖိုးဆုံးတာကို အဲဒီညက မအိပ်ပဲ စောင့်ကြည့်နေတဲ့ ကျွန်မတို့ ရဲ့ ကြီးတော်ကြီး(ဘကြီးရဲ့ အမျိုးသမီး)၊ သူနာပြုဆရာမနဲ့နောက်အမျိုးသမီး အကူတစ်ယောက်ရယ်ပဲ သိလိုက်တယ်။ လိုရမယ်ရဆို ညနေပိုင်းက အောက်ဆီဂျင်ဘူးတွေစီစဉ်ပြီး သူနာပြုဆရာမပါ ခေါ်ထားလိုက်တာတဲ့။ အရင်ရက်တွေကတောင် ညညဆို ခွေးဟောင်သံ ဆူသံပူသံတွေ ကြားရသေးတယ်။ အဖိုးဆုံးတဲ့ညက ပတ်ဝန်းကျင်တစ်ခုလုံး တစ်ညလုံး တိတ်တိတ်ဆိတ်ဆိတ်ပဲလို့ သိရတယ်။ ခွေးအူသံတွေ၊ ငှက်ဆိုးထိုးသံတွေ ကြားရမလား စိတ်ပူနေတာ၊ ဘာဆိုဘာမှ မကြားရပဲ အေးအေးချမ်းချမ်းနဲ့ဘ၀ကူးသွားမျိုးဖြစ်ကြောင်း သိခဲ့ရပါတယ်။
အတူရှိနေတဲ့ မြေးတွေဆို နောက်နေ့ မနက် သူတို့နိုးလာချိန်မှာ အဖိုးနေကောင်းလား၊ ဘယ်လိုနေသေးလည်း မေးချိန်မှ ပဲ အဖိုးညက ဆုံးသွားတယ်ဆို သိလိုက်ရတာလို့ ပြောပြတယ်။ အဖိုး အဖျားနည်းနည်းရှိနေတာ သိကြတယ်၊ ဒါပေမယ့် သူတို့ မအိပ်ခင် စနေနေ့ ည ၁၀ နာရီလောက်မှာ အဖိုးက ဘုရားရှစ်ခိုး ဘာညာ သူဘာသာ ကိုယ်တိုင်လုပ်ပြီး အေးအေးဆေးဆေး အိပ်သွားဆိုတော့ ခုလို ချက်ချင်းကြီးဆုံးသွားမယ် ဘယ်သူမှ မထင်ကြဘူးဖြစ်နေကြတယ်။ အဖိုးဆုံးတာနဲ့ကြီးတော်ကြီးနဲ့သူရဲ့သားငယ် (ကျွန်မ့ မောင်ဝမ်းကွဲ) ကိုနှိုးပြီး ရေချိုးပြင်ဆင်တာဘာညာလုပ် လိုက်တယ်။ အဖိုးကို တနင်္ဂနွေ နေ့ လည် ၂ နာရီမှာ နေ့ ချင်းပဲ သဂြိုဟ်လိုက်တယ်လို့ ပြောပြတယ်။ အဖိုးဟာ သဂြိုဟ်တဲ့ အချိန်အထိ အသားအရည်က ပြောင်းလဲမှု့ မရှိ နဂို အိပ်နေသလိုပဲလို့ သိရတယ်။ ကျွန်မတို့ အဖိုးက အသက်သာ ရာကျော်နေတာ လူက ပိန်ပိန်မဟုတ်ဘူး၊ ခပ်ပြည့်ပြည့်ရှိတယ်။
ကျွန်မတို့ အဖိုးက အသက်ရာကျော် ရှိနေပါပြီ။ အဖိုးအသက် ၁၀၅ နှစ်မပြည့်သေးတာ သိတယ်။ အဖိုးက ကျွန်မလိုပဲ နတ်တော်လအတွင်း မွေးတာ သိတယ်။ အဖိုးမွေးနေ့ ပြီးနောက်တစ်ရက်က ကရင်နှစ်သစ်ကူးနေ့ ဆိုတာလည်း သိပေမယ့် အသက်အတိအကျ ဘယ်လောက် ဆိုတာ မမှတ်မိဘူး။ အမေ့ကို သေချာအောင် ပြန်မေးကြည့်ဖြစ်တယ်။ အဖိုးမွေးနေ့ က နတ်တော်လကွယ်နေ့ ၊ ကြာသာပတေးနေ့ ဖွား၊ လာမယ့် နတ်တော်လကွယ်ဆို အဖိုးအသက် ၁၀၄ နှစ်ပြည့်မယ်လို့အမေက ပြောပြတယ်။ ဒါဆို တွက်ကြည့်တာ အဖိုးမွေးနေ့ က မြန်မာခုနှစ်နဲ့ ဆို ၁၂၆၉ နတ်တော်လကွယ်နေ့ ။ အင်္ဂလိပ်လိုရော အတိအကျသိနိုင်မလား အင်တာနက်ပေါ်လိုက်၇ှာတာ မြန်မာနှစ် ၁၃၀၀ ကစလိုပဲ ရှာလို့ ၇တော့ ဘယ်ရက်လည်း ကြည့်မရခဲ့ဘူး။ အိမ်က လူကြီးတွေကို ပြန်မေးရင်တော့ သိနိုင်မယ် ထင်တယ်၊
မွေးဖွားသည့်ရက် - ၁၂၆၉ နတ်တော်လကွယ်နေ့ 
ကွယ်လွန်သည့်ရက် - ၁၃၇၃ တော်သလင်းလဆန်း ၇ ရက်နေ့(၄-စက်တင်ဘာ-၂၀၁၁)
ကျွန်မတို့ ရဲ့ အဖိုး ဦးဘပျိုဟာ နှစ် ၁၀၃ နှစ်ကျော် ၁၀၄ နှစ်နီးပါး လူ့ ဘ၀မှာ နေသွားပြီး ငြိမ်းငြိမ်းချမ်းချမ်း နောက်တစ်ဘ၀ကို ကူးပြောင်းသွားခဲ့ပြီ။
ပြီးခဲ့တဲ့ စနေနေ့( ၁၀-စက်တင်ဘာ-၂၀၁၁) မှာ အဖိုးဆုံးတာ ၇ ရက်ပြည့်၊ ရက်လည် သပိတ်သွပ်ကို ကျွန်မတို့ ရဲ့ ဘကြီးအိမ်မှာ ပြုလုပ်ခဲ့ပါတယ်။ အဖိုးအတွက် ရည်စူးပြီး ကုသိုလ်ကောင်းမှု့ တွေ လုပ်ကြခဲ့တယ်။
-အာရုံတက်မှာ ဘုန်းကြီး ၅ ပါးပင့်ပြီး သပိတ်သွပ် တရားနာ၊ ဆွမ်းကပ်၊ ပစ်စည်း ၆၇ မျိုးနဲ့ အလှူငွေကပ်
-မနက်ခင်းမှာ အိမ်ရှေ့ ကို ဆွမ်းခံကြွလာတဲ့ ရဟန်းကိုရင် အပါး ၂၄၀ ကို ဒန်ပေါက် ဆွမ်းလောင်း
(ပုံမှန်ဆို ကြီးတော်က မနက်တိုင်း အိမ်ရှေ့ မှ ဆွမ်းခံကြွသမျှ ကိုယ်တော်တိုင်းကို ထမင်းနဲ့ဆွမ်းဟင်း လောင်းနေကြ။ အဲဒီနေ့ ကတော့ အဖိုးအတွက် ကုသိုလ်ကောင်းမှု့အလှူပြုတဲ့အနေနဲ့ဒန်ပေါက်ထမင်းနဲ့ ကြက်သားဟင်းချက်လောင်းတယ်။ ပုံမှန်နေ့ တိုင်းဆွမ်းလောင်းသလို သပိတ်ထဲ ဆွမ်းဟင်းခွက်နဲ့ ၊ ထမင်းထည့်လှူတာမျိုးမဟုတ်ပဲ ဒန်ပေါက်ထမင်းနဲ့ ဟင်းတွေကို ဘူးတွေနဲ့ ထည့်ပြီး ဆွမ်းလောင်းတာမျိုး လုပ်တာလို့ပြောပြတယ်။ ဆွမ်းဘူးပေါင်း ၂၄၀ ကုန်သွားတဲ့အတွက် အဲဒီနေ့ မနက်က ဘုန်းကြီးနဲ့ ကိုယ်ရင် အပါး ၂၄၀ ဆွမ်းခံကြွတယ် သိခဲ့ရတာလို ပြောနိုင်တာပါ။ အဲဒီနေ့ က ကျွန်မ ဖုန်းဆက်တဲ့အချိန် မနက် ၇း၃၀ နာရီလောက်မှာတင် ပထမ ပြင်ဆင်ထားတဲ့ ၂၀၉ ဘူး ကုန်သွားလို့ထပ်ပြင်ဆင် ဆွမ်းလောင်းနေတယ်လို့သိခဲ့ရပါတယ်။)
- ရက်လည်ကြွလာတဲ့ ဧည့်သည်တွေကိုလည်း ဒန်ပေါက်နဲ့ကြက်သားဟင်းကျွေးတယ်လို့ ပြောပြတယ်။ လူ ၃၀၀ လောက်လာတယ်လို့ သိရတယ်။
ဒန်ပေါက်ချက်တာ ဆန် ၂ တင်းခွဲ ကုန်တယ်၊ အကူရသမျှ ပစ်စည်းတွေကို အကုန် ပြန်လှူဖြစ်ခဲ့တယ်။ အလှူလာသမျှ လူတွေကို ကျွေးမွေးလှူဒါန်းတာ ဘာမှ လိုအပ်မှု့ မရှိ အဆင်ပြေပြေ လှူဒါန်းနိုင်တဲ့အတွက် ကျန်ရစ်သူမိသားစုတွေ၊ ကျွန်မ့ အမေနှင့် ဆွေမျိုးများ အားလုံး စိတ်အေးချမ်းမှု့ရှိကြောင်း သိရပါတယ်။
သတင်းမေး အားပေးတဲ့ သူငယ်ချင်း၊ မိတ်ဆွေများကို မိသားစုဝင်အားလုံးက အထူးကျေးဇူးတင်ပါတယ်။
သူငယ်ချင်းတွေ မေးသလိုပဲ အဲဒီအဖိုးက ကျွန်မတို့ နဲ့ တူတူနေ၊ သူငယ်ချင်းတွေ တွေ့ ဖူးနေတဲ့ အဖိုးပါ။ အဖိုးက ကျွန်မတို့ အမေ၊ သူ့ ရဲ့ သမီး အငယ်ဆုံးကို စောင့်ရှာက်ဖို့သမီးနဲ့ ပဲနေမယ်ဆိုပြီး ကျွန်မတို့မိသားစုနဲ့တူတူနေခဲ့တာပါ။ အဖိုးဆုံးတာကတော့ ရန်ကုန်မှာမဟုတ်ပါဘူး။ လွန်ခဲ့တဲ့ ၄-၅ နှစ်ကမှ အမေရဲ့ အစ်ကိုကြီး မိသားစုရှိတဲ့ သူ့ ဇာတိအရပ် ပြန်ပြောင်းနေတာပါ။
Posted by Nay Nay Naing at 9/10/2011 12:38:00 PM3comments
Thinking of you with love on your birthday and
Wishing you everything that brings you happiness today and always!
Happy Birthday, My Little Sister..
Posted by Nay Nay Naing at 9/08/2011 08:02:00 PM 1 comments